Blog- Tipping: HameLive | Martech Zone
आइतबार, जुलाई 8, 2007 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
HameLive फरक हुन चाहने आमा बुबालाई समर्पित ब्लग हो। प्यारेन्टी .्ग मेरो लागि नजिकको र प्रिय हो। मसँग एक छोरा छ र यो IUPUI मा शुरू हुँदै छ र एक छोरी मध्य विद्यालयमा।
म एक जवान बुबा थिए र सायद आमा बुबाले गर्न सक्ने हरेक गल्ती गरे। म दृढ विश्वासी हुँ कि जीवनको आश्चर्यकर्ममा केहि हदसम्म भगवानले आमाबाबुलाई कुनै गल्ती गर्न र अझै ठूलो बच्चाहरु लाई अनुमति दिनुहुन्छ - जब सम्म हामी उनीहरूलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्दछौं। र तिनीहरूलाई हाम्रो अगाडि राख्नुहोस्!
म बढी ध्यान दिन जाँदैछु हेमलाइफ र मैले गरेको गल्तीहरूलाई पास गर्नुहोस् ताकि अरूले अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्दैन!
तपाइँको कार्यान्वयन कटलाइन विषयवस्तु राम्रो छ। यो एक Geurgeous लेआउट संग एक अद्भुत विषयवस्तु हो जुन अप्टिमाइज गरिएको छ र ठूलो उपयोगिताको लागि निर्मित हो। मलाई विशेष रूपमा मनपर्दछ कि कसरी तपाइँ तपाइँको लोगो र बाइलाइन को लागी CSS को उपयोग गर्नुभयो, तर खोज इन्जिनहरु को लागी पढ्न सामग्री बनाए। राम्रो काम! पहिलो टिप तपाईलाई थप्नको लागि हो साइटमैपयद्यपि! यो खोज ईन्जिनको लागि एक रोडम्याप हो सजिलै तपाईको साइट सामग्री नेभिगेट गर्न वास्तवमा आफैंलाई नबुझीकन।
मेरो मनपर्ने साइटम्याप प्लगइन को 3.0b7 संस्करण को हो गुगल साइटम्याप प्लगइन। मैले व्यक्तिगत रूपमा याहूमा प्रस्तुत गर्न यसलाई परिमार्जन गरेको छु! साथै लेखकलाई कोड पठाइयो तर उसले अर्को रिलीजमा निर्माण गरेको छैन। मलाई आशा छ कि उसले यसलाई सम्मिलित गर्‍यो।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो साइटम्याप स्थानमा पाउनुभयो भने, अर्को कुरा भनेको तपाईंको रोबोट्स.टीएसटी फाइललाई साइटम्यापको स्थानका साथ अपडेट गर्नु हो। यो साइटम्याप विशिष्टतामा एकदम भर्खरको थप हो, तर पछि यसको भन्दा अब यसको फाइदा लिन राम्रो हुन्छ! यो कस्तो देखिनु पर्छ भनेर यहाँ छ:
प्रयोगकर्ता-एजेन्ट: * अस्वीकृत: / wp- साइटम्याप: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
रोरीलाई विशेष अनुरोध गरीयो मँ छु कि ब्लगिंग कोटि यसको आफ्नै ब्लग हुनु पर्छ वा हेमेलाइफको अंश हुनु पर्छ। म भिम्पि बाहिर जान्छु र भन्छु कि मलाई लाग्छ, अन्तमा, यो तपाईको हो। यद्यपि, म बुझ्दछु कि यदि मान्छेहरूले यसमा टिप्पणी दिन्छन् - किनकि दुई विषयहरू साँच्चिकै फरक छन्।
केवल एक विचार, तर के तपाइँसँग प्यारेन्टि page पृष्ठ र ब्लगि page पृष्ठ बनाउनको लागि एक साधन छ जुन मानिसहरू सीधै दुई फिडहरूसँग जान सक्दछन्, प्रत्येकको लागि एक? मलाई लाग्छ कि यो ट्यागि plugin प्लगइन प्रयोग गरेर पूरा गर्न सकिन्छ परम ट्याग वारियर र प्रत्येक पोष्टलाई "प्यारेन्टिंग" वा "ब्लगि” "सँग ट्याग गर्दै। यसले केहि काम लिन सक्दछ, तर यो साँच्चिकै राम्रो हुनेछ!
मैले यो पनि याद गरे जब मैले एक यूआरएल परीक्षण गरे, जस्तै http://www.hamelife.com/parenting त्यो साधारण 404०XNUMX पृष्ठ आउँछ। चेक आउट गर्नुहोस् post०404 पृष्ठ अनुकूलन गर्नमा मेरो पोष्ट - यो लगभग तपाईंको साइट को लागी अनुकूलन खोज ईन्जिन बनाउन को जस्तै हो।
HameLive संग एक धारिलो साइट हो अमूल्य सामग्री। रोरीको आफ्नो बाहुलामा पनि केही तरिकाहरू छन्। माथि दायाँपट्टी हेमलाइफ मेनूमा हेर्नुहोस् ... धेरै अनौंठो (र रमाईलो!)। तपाइँको ब्लग, रोरी टिप दिनुहोस् को लागी धन्यवाद।
जुलाई १,, २०१ at १::8२ अपराह्न
तपाइँको ब्लग, रोरी टिप दिनुहोस् को लागी धन्यवाद।
के तिमी ठट्टा गर्दैछौ, डग? म साइटमा एक उपयोगी आँखा कास्टिंग को लागी म तपाईंलाई धेरै आभारी छु। मलाई प्राप्त गर्न सक्ने सबै सल्लाहहरू आवश्यक छन्, र तपाईले दिनु भएको पोइन्टर्सको म साँच्चिकै कदर गर्दछु।
पहिलो बन्द, म तपाईंको बधाई द्वारा उडाएको छु। धेरै धेरै धन्यबाद - तिनीहरू अत्यन्तै प्रोत्साहनजनक छन्।
अब, म आश्चर्य गर्दछु यदि तपाईं मलाई आफ्ना थप सुझावहरूको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ:
पोइन्ट # 1 - हेमलाइफको M ले एक साइटम्यापमा आगन्तुक लिन्छ। मैले प्रयोग गरें साइटलाइन नक्सा कटलाइनको लागि डिजाइन गरिएको हो। के मैले यो सहि कन्फिगर गरेको छु? वा मँ सिधा पोइन्ट # २ मा सर्नुपर्दछ र मेरो रोबोट.टी.टीक्स सही संग कन्फिगर गर्नु पर्छ?
मेरो robots.txt वास्तवमा पढ्छ:
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / wp-सामग्री /
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / wp-admin /
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / wp-शामिल /
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / wp-
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / फिड /
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / ट्र्याकब्याक /
अस्वीकृत गर्नुहोस्: / cgi-bin /
र म यो hamelife.com/wpblog/robots.txt मा स्थित छ। यसका साथ केही ठीक देखिदैन - मलाई लाग्छ कि यो कहिँ अवस्थित हुनुपर्दछ, तर म कसरी निश्चित गर्ने भनेर निश्चित छैन। म सहयोग प्रयोग गर्न सक्छु।
मेरो सेटअप को लागी हेमेल लाई.com/wpblog मा ब्लग छ, त्यसैले म यो रूट निर्देशिका मा छैन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो मलाई कस्तो भ्रामक भइरहेको छ!
पोइन्ट # - - तपाईको सल्लाह को लागी धन्यवाद, म यस बारे मा अधिक सोच्नु पर्छ। म एक दोस्रो ब्लग तिर झुकाव छु। मलाई थाहा छ यसको अर्थ दुई धेरै सामग्री राख्नु हो, तर म यो ब्ल्गिंग चीजको बारेमा थोरै बढी हुन सिकिरहेको छु - त्यसैले तनाव नहोस्।
पोइन्ट #4- म तपाईको WordPress 404०XNUMX लेखमा हेर्दैछु जस्तो कि हामी बोल्दै छौं। यो उत्कृष्ट सल्लाह हो र म यसलाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयन गर्ने छु।
धन्यबाद, डग। तपाईंको सहयोगको धेरै सराहना गरियो।
म तपाइँको रोबोट्स। Txt फाईल तपाइँको मूल निर्देशिका मा राख्न सिफारिश गर्दछु। तपाईं थोरै फेन्सी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि, र तपाईंको मूलमा htaccess फाईलमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
पुनर्निर्देशित robots.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt
म अझै पनि XML साइटम्याप राख्छु साथै १ मा निर्दिष्ट गरेको प्लगइनको प्रयोग गरेर। एक XML साइटम्याप साइटमैप मानकको अनुरूप हो। यो साइटम्याप प्रत्येक पोष्टको साथ पुन: निर्माण हुनेछ र स्वचालित रूपमा खोजी ईन्जिनहरूलाई पनि पिंग गर्नेछ। यो धेरै राम्रो छ।
यदि तपाइँ साईटम्यापमा राख्नुहुन्छ र यो डब्ल्यूपीब्लग डाइरेक्टरीमा पनि छ भने, तपाइँ यसलाई पुन: निर्देशित पनि गर्न सक्नुहुनेछ:
रीडायरेक्ट साइटमैप.एक्सएमएल http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml
सावधानी र आफ्नो htaccess फाइल को ब्याकअप प्रयोग गर्नुहोस् (यो लुकेको हुन सक्छ आफ्नो लुकेका फाईलहरू तपाईको FTP सफ्टवेयरको साथ अवश्य हेर्नुहोस्) यदि तपाईंले यसलाई हुज गर्नुभयो भने!
त्यसो भए तपाईको रोबोट.टी.टी.टी. फाइलमा साइटम्याप लाइन थप्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं htaccess फाईलमा पुनःनिर्देशित लाइन पाउनुभयो भने, तपाईं या त यूआरआई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ… सायद शाब्दिकमा पूर्वनिर्धारित गर्नेछु, यद्यपि:
मैले भर्खर तपाईको 404०XNUMX.php, डग लागू गरेको छु।
यो प्रयास गर्नुस्: hamelife.com/child
अब, कि छ राम्रो 404 पृष्ठ!
फेरी - धेरै धन्यबाद।